Kiiska kumbuyuutarka ee ugu fiican ee lagu rakibay ipad Air 4 pro 11 ee Samsung tab S7 S6 lite Soo saaraha iyo Warshadaha | Socodka
Runtii waad jeclaan doontaa inaad ku dhufato KIISKAN
Kiiskan kumbuyuutarka wuxuu isku daraa trackpad sax ah oo leh kumbuyuutar cabbir buuxa leh oo iPad-kaaga ah. Taageerada tilmaanta taabashada oo buuxa waxay u beddeleysaa iPad-kaaga mashiin wax soo saar leh oo loogu talagalay ka shaqeynta waraaqaha iyo dukumiintiyada, qalab waxbarasho oo adag oo loogu talagalay fasalo fog, iyo inbadan - fursadaha waa kuwo aan dhammaad lahayn.
La shaqee saxsanaanta trackpad ee barnaamijyada sida qoraalada, bogagga, miisaska nambarada iyo nuxurka. Waxaad awoodi doontaa inaad iftiimiso unugyada waraaqaha, nuqul ka sameyso ereyada, oo aad si fudud ugu saxto emaylka.
Si dhakhso leh ula soco wax soo saarkaaga adoo gacanta ku haya tilmaanta farta aad horay u taqaanay ee aad u jeclayd. Swipe, rog, rog barnaamijyada, qanjaruufo, laba jibbaar, iyo inbadan.
Kaadi-bedbeddelka jilicsan wuxuu bixiyaa 40 ° oo foorar ah si aad had iyo jeer u hesho xagasha saxda ah ee hawsha gacanta ku haysa Qalab farsamo oo adag ayaa hubiya in laadku uu si adag meesha ugu sii yaallo oo aanu burburin, xitaa haddii xoog loo taabto.
ILAALINTA HOR IYO DIB
Ka ilaali hore iyo gadaasha IPad-gaaga nabarrada, xoqida, iyo qubashada. Waxay si ammaan ah ugu haysataa iPad kiis khafiif ah oo ilaaliya geesaha oo aan culeys kaa saarin. Dharka dusha leh ee ku duuban ayaa u jilicsan taabashada.
Dibedda iyo gadaal: laga sameeyay maqaar PU oo waara, ka ilaali kaniinigaaga boodhka, dhibcaha iyo kuuskuusyada loo isticmaalo maalin kasta.
Gudaha: TPU qolof dhabarka iyo microfiber jilicsan.
Qolof TPU wuxuu si adag u hayaa ipad-gaaga, shaqeyn buuxda ee ipad-gaaga. Wuxuu si buuxda u ilaaliyaa ipad-kaaga afarta gees iyo gees.
Microfibre jilicsan ayaa kaniinkaaga ka ilaaliya in la xoqo.
DUUBANKA WAA LAGU DOON KARAA
Ku raaxayso isticmaalka iPad-ka qolkaaga jiifka iyadoo laydhkiisu hooseeyo? Waxaan sidoo kale samayn Taasi waa sababta kumbuyuutarka isku dhafan uu u qalabaysan yahay gadaal gadaal. Todobo midab oo nalalka gadaal ee la hagaajin karo ayaa xaqiijinaya inaad arki karto waxaad sameyneyso haddii aad ku jirto qolka jiifka, diyaarad, xero, ama deegaan kale oo iftiinkiisu hooseeyo. Iyo sidoo kale shirkad la leh jawigaaga ciyaaraha.
Shaqada loo qoondeeyey iyo furayaasha tuuryo badan si loogala hadlo macruufka, Android ama nidaamka Windows, ha kuu oggolaato inaad xakameyso kaniiniga adigoon ka tagin kumbuyuutarka.
Diyaar u ah marka aad u baahatid, iskudhafka kumbuyuutarrada loo yaqaan 'Bluetooth' wuxuu adeegsadaa batteriga lithium ee dib loo soo celin karo si uu ugu awoodo kumbuyuutarka. Thanks to nidaamka awoodda smart, waxay socotaa illaa 3 sano iyada oo aan loo baahnayn in la beddelo.
Marka labaad, taabo batoonka "CONNECT"
Ugu dambeyntiina, waxay heli doontaa Keyboard-ka Bluetooth 3.0. Kaliya waad u dhigantaa.
Dhererka x Width x Qoto dheer: 270 mm x 200 mm x 20mm
MOQ: 50PCS / midab
Shahaadada: FCC, ROHS, CE, GS, RECH, Sgs
Cabbirka: 11 ”
Naqshad: Kiiska kiiboodhka iskudhafan ee isku dhafan
Nooca Kiiboodhka: Luqadda Ingiriisiga
Xirxirida: sanduuqa waraaqda, boorsada opp
Lacag-bixinta: 1.T / T 2.Warqad-galbeed 3. Paypal
Logo: Debossed / Aqbal kartoo
Naqshadeynta OEM / ODM: aqbal naqshad loo habeeyay
Wakhtiga la bixinayo: 3-5 maalmood oo shaqo
Waxyaabaha: Daboolka maqaarka ee Premium oo leh qolof dhabarka TPU ah
Feature: waara, xoqida iska caabin ah, lama filaan ah, caddaynta boodhka, naqshadeynta birlabta.
Nooca Xiriirka: Bluetooth 3.0
Bixinta Biyaha: Haa, kiiska dibedda .Maya, furayaasha kumbuyuutarka
Hurdo / Soo-kac Wake: Maya
Magnet Xidhitaanka: Haa
Hole Camera: Haa
Daawashada Jagooyinka: 105, 120, 135 iyo shahaadooyin ka badan
Fariidada Magnetic: Haa
Nalalka Tusiyaha (LED): Haa, Bluetooth iyo koronto
Muuqaalka LCD: Maya
Safarka Muhiimka ah: 2 mm
Keyboard masaafada wax ku ool ah: 10m gudahood
Nolosha Furaha: in ka badan 3 milyan oo istaroog
Furayaasha Gaarka ah: Iskuxirka shaqooyinka dheeraadka ah ee furayaasha toobiye, oo ay kujiraan kontaroolada warbaahinta, xakameynta mugga, qufulka shaashadda iyo raadinta
Ku xir / Awood: Beddelka / badhanka badhanka badhanka
Faahfaahinta Batariga: Bateriga Lithium-ka ku dhex jira
Nooca Batariga: Dib loo buuxin karo
macruufka / Android / Windows OS
Kiisaska kiniiniga ah ee soo socda ayaa la heli karaa si loo soo saaro. Kusoo dhawow OEM / ODM kiniiniyada kale.
iPad Air 4th Jiilka 10.9 "2020
Tusaale: A2072, A2316, A2324, A2325
iPad Pro 11 2020 Jiilka 2aad Model: A2228, A2068, A2230, A2231
iPad Pro 12.9 2020 jiilka 4aad
iPad Pro 12.9 2018 jiilka 3aad
Tusaale: A1876, A2014, A1895, A1983
Hawada iPad 10.5 2019 jiilka 3aad Model: A2152, A2123, A2153, A2154
iPad 9.7 2018/2017 (6 jiilka 5aad) Model: A1893 ， A1954 ， A1822 ， A1823
iPad Pro 10.5 2017 Tusaale: A1701, A1709, A1852
Galaxy Tab A7 10.4 "(2020) Tusaale: SM-T505 SM-T500 SM-T507
Hore: Universal folio case oo leh kumbuyuutareedka laga saari karo ee loo yaqaan '9.7-11 inch Apple, Andriod, Windows tablets
Xiga: kiiska oo leh kumbuyuutareedka laga saari karo ee loo yaqaan 'Lenovo tab M10 Plus For Ipad for Samsung tablet'
Kiiska Kiniiniga Keyboard-ka Bluetooth
Kiiska Keyboard Ipad
Kiiska Kiiboodhka La Saari Karo
Kiiska Kiiboodhka Kiniinka
Kiiska Kiiboodhka wireless-ka ah
kiiska la keyboard Bluetooth saari karo for Leno ...